प्रा.डा. गाेविन्द केसी हिँडेकाे बाटाे र गाेपाल पराजुलीहरू | Suvadin !
प्रधानन्यायाधीश हटाउन सांसदको दुईतिहाइ मतको जरुरत पर्छ। यो सम्भावना नभएको कुरा गरेर केसीले आफ्नो औकात भुले, गरिमा घटाए, तौल कम गरे, आज प्रमाणित भयो। केसी त्यसै बोल्दैनन्, बोलेपछि छोडेर हिँड्ने मान्छे होइनन्। सर्वोच्चबाट प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बहिर्गमन विधि र प्रक्रियाले गलत थियो, असंगत भयो त्यो छलफल र आगामी दिनमा हेक्का राख्नु पर्ने प्रसंग हुनसक्छ।
Mar 17, 2018 12:54
सञ्जीव कार्की र डा. गाेविन्द केसी।
Shared: 538 times | Share this on
अाम मानिसलाई तत्काल अफ्ठ्यारो, दुरुह र अकल्पनीय लागेको अनि दुस्साहस सम्झिएको कुरा थियो। दुनियाँले पहाडसँग कुइनोले जोरी खोजेझैं मानेका, बालहठ जस्तो सम्झिएका र समयभन्दा विपरीत ठानेका कुरा जुन भविष्यमा यथार्थमा परिणत हुन्छ त्यो बोलेर र त्यसैमा अड्डी लिएर डाक्टर गाेविन्द केसी 'बहुलाउँछ्न्'। समयले ठुलो र लामो फन्को नलाउँदै उनको त्यो ढिट सत्यमा परिवर्तन हुन्छ।
यही आँट, साहस र निष्ठा अनि ज्यान नै जोखिममा राख्ने बानीलाई मान्छेले भगवानको संज्ञा दिन्छ्न्, हाम्रो सामाजिक चेतनाको स्तरमा त्यो अस्वाभाविक लाग्दैन। तर, सामान्य नेपालीले भगवान सम्झनु र केही जान्ने बुझ्नेले उनलाई भगवान बनाउने लालसा पाल्नु नितान्त फरक कुरा हुन्। म भन्छु, यी मनुवा भगवान चैं होइनन्, म उनलाई भगवान बनाउने कुरासँग मतभेद राख्छु। कारण गोविन्द केसीलाई भगवान बनाउनेहरुसँग बृहत योजना होइन, संकुचित स्वार्थ र झिनो आफूअनुकूल आश छ।
तिमी, यदि तिमीलाई भगवान बनाउनेहरुको भीडभित्र छौं, र उनीहरुको संकुचित स्वार्थमा घेरियौं भने तिमीलाई लोभीपापीहरुले असल मान्छे बन्ने बाटो छेकी दिन्छ्न्। मान्छेहरु पल पलमा स्वार्थ राखेर सघाउनअघि सरेको जस्तो गर्छन्। स्वार्थ पूरा भएपछि वा आफ्नो तुच्छ स्वार्थमा ठेस लाग्ने विषय र प्रसंग आएपछि कसरी तर्किन्छन्? ब्याक हुन्छ्न्, त्यो तिमीले देखेकै छौं। र, अनुभूत गरेकै छौं। तिमीलाई थाहा नै छ, अहिलेसम्म कति त्यस्ता समूह आए अनि गए, त्यसको हेक्का तिमीले राख्नुपर्ने हुन्छ।
अनि आजसम्म क-कसले अविरल, अविच्छिन्न र अविचलित भएर साथमा रहे बसेका छन्, त्यसको लेखाजोखा पनि तिमीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, कसले कस्तो स्वार्थ बोकेको छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ। अनि एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने दुनियाँमा स्वार्थरहित मान्छे चाहिँ कोही पनि हुँदैनन्। र कसैले म हुँ र छु भन्यो त्यो मान्छे होइन। मान्छे त कमीकमजोरीसहित नै महान हुन्छ्न्, असल हुन्छ्न्।
लोकमानसिंह कार्कीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्दा धेरै मान्छे जिब्रो टाेक्ने गर्थे, लोकमानको बर्खास्तीको माग राखेर सत्याग्रह गर्दा धेरैले डाक्टर केसीलाइ साँच्चै पागल सम्झन्थे, डाक्टर केसीको नजिक पर्न डराउँथे। त्यतिबेला धेरैले डाक्टर केसीको साथ छोडेर हिँडे, एक्लो पारे। तर केसी रौँ बराबर पनि डगेनन्। र आफ्नो साथ छोडेर जानेसँग गुनासो पनि गरेनन्। आखिर लोकमान असत्य र बेमानको बाटो हिँडेर बस्न सकेनन्, उनको सत्ता हरियो, गलहत्तिनु पर्ने परिस्थिति बन्यो, यसको जड थियो, केसीको सत्यवादी अडान र रुझान।
केसी प्रायः एक्लै 'बहुलाउँछ्न्'। अनि देशले पिलो निचोर्ने मौका पाउँछ। निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली पनि त्यस्तै एउटा पिलो थिए, न्याय क्षेत्रको सर्वोच्च स्थानमा बसेर देश पिरोल्ने पिलो। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीविरुद्ध गोविन्द केसीले बोल्दा पनि धेरै मान्छेले भने, अब चैं केसी 'बहुलाएको हो, यति असम्भव कुरा गरेर पनि हुन्छ।'
प्रधानन्यायाधीश हटाउन सांसदको दुईतिहाइ मतको जरुरत पर्छ। यो सम्भावना नभएको कुरा गरेर केसीले आफ्नो औकात भुले, गरिमा घटाए, तौल कम गरे, आज प्रमाणित भयो। केसी त्यसै बोल्दैनन्, बोलेपछि छोडेर हिँड्ने मान्छे होइनन्। सर्वोच्चबाट प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बहिर्गमन विधि र प्रक्रियाले गलत थियो, असंगत भयो त्यो छलफल र आगामी दिनमा हेक्का राख्नु पर्ने प्रसंग हुनसक्छ। तर केसीले के कुरा देखाए? कुन कुरा औल्याउँदै अडान राखे?, कसको पक्षमा अडान राखे खुट्टा कमाएनन्? यो महत्त्वपूर्ण र गम्भीर सवाल हो।
एउटा मान्छेको रूपमा यिनका मानवोचित त्रुटी होलान्, भेटिएलान्। तर उनले जुन सवाल प्रसंग घटना र बेथितिका विरुद्ध बोले, मुख फोर्ने हिम्मत गरे, त्यो नेपाल र नेपालीको अहम् प्रश्न हो। बहुलाउने गरी पैसा कमाउने अवसर छोडेर किन मेडिकल माफिया र दलालको विरुद्धमा एक्लै ठडिन्छ्न् यी मनुवा? किन यिनलाई पैसाको भोक जाग्दैन? किन नीति नियम निष्ठा र ईमानको भोक मात्र लागिरहन्छ?
हामी र यिनी हुनुको फरक यही हो। यिनी कष्टपूर्ण तर आत्मिक चाहको कठिन बाटोमा छन्। एक्लै छन्, तर सत्यको बाटोमा छन्। सत्यको बाटोमा हिँड्नेहरुको कुरा काल्पनिक अपत्यारिलो र लय भंग लाग्न सक्छ, तर निष्ठाको त्यो भीमकाय पर्वत त्यही मान्छे चढ्न सक्छ, जसको यसमा निरन्तर लगाव छ, पाइला छ, हो यस्तै अग्लो पहाडको यात्रामा छन्, अविचलित यात्रामा डाक्टर केसी।
(लेखक कार्की स्वास्थ्य शिक्षाका लागि लडिरहेका डाक्टर केसी अभियानका अभियन्ता हुन्।)